Ihuenyo nke na-edozi onwe ya nwere ike ịbụ eziokwu n'oge na-adịghị anya n'ihi Motorola | Akụkọ akụrụngwa
Oge ọ bụla anyị mere ekwentị anyị, ihe mbụ anyị nwere ike ime bụ ịzụta ihe nchebe ihuenyo iji gbochie ihuenyo nke ngwaọrụ anyị imebi oge mbụ anyị gbanwere ya, ebe ọ bụ otu n'ime akụkụ kachasị ọnụ nke ngwaọrụ ahụ, ọ bụghị naanị n'ihi nke ụgwọ ya, mana n'ihi ndọgbu ọ na-ewe iji gbanwee ya. Anyị na-enwetakwa ikpe iji kpuchido ngwaọrụ anyị, ịbụ ihe nchedo maka ihuenyo anyị n'agbanyeghị na ọ naghị egbochi ya imebi. Dabere na patent ọhụrụ nke Motorola debara aha, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara anyị ihuenyo nwere ike idozi onwe ya na-akpaghị aka site na itinye okpomọkụ.
A ga-arụpụta panel a site na iji polymeters Memory Memory, ihe na-emeghachi omume dị iche iche iji nweta ụdị mbụ. N'okwu a, ihe mkpali dị mkpa iji weghachite ọdịdị ga-abụ okpomọkụ, mana akọwaghị ya ma ọ ga-etinye ya na mpụga ma ọ bụ na ngwaọrụ ahụ n'onwe ya ga-ahụ maka itinye ya n'ọrụ. Nkà na ụzụ a, nke dị n'ahịa maka obere oge, ya mere ọnụahịa ya taa dị oke elu, o yighị ka ọ ga-ahụ ìhè n'afọ ndị na-abịanụ, ọ dịkarịa ala ruo mgbe imepụta ụdị polymer a na-ebelata ọnụahịa ya.
A ga-etinye ogwe a nke polymeters na ihuenyo n'onwe ya, na-enye nchebe yiri nke Gorilla Glass na-enye anyị ugbu a. N'ịbụ patent, nke a apụtaghị na ọ rutere n'ahịa ahụ, mana na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịdebe aka ya, na-edebanye aha patent a ka onye ọ bụla chọrọ itinye ya na ngwaọrụ ha gafee igbe ahụ, n'oge na-adịghị anya emechaa.
Na vidiyo dị n'elu anyị nwere ike ịhụ etu ihe a si arụ ọrụ, nke Mahadum Rochester nke dị na United States mepụtara, ka ị nwee ike ịmata etu esi eji naanị ọkụ mmadụ eme ka ọ gbakee ụdị nke a multimeter nwere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ihuenyo nke na-edozi onwe ya nwere ike ịbụ eziokwu n'oge na-adịghị anya n'ihi Motorola